Error Repair | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Error Repair. Show all posts
IMEI error ကို Oneclick နဲ့ ဖြေရှင်းမယ်
Samsaung Phone တွေ အတွက် Firmware အမြင့် တင်မိသော် လည်းကောင်း အနိုမ့်ဆင်း မိသော် လည်ကောင်း IMEI ပြသနာ တွေကို One Click နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးတာ ပါ အဲ့ tool လေးကတော့ Samsaung Remote Client လို့ ခေါ်တဲ့ tool လေးပါ။
▼ Download Samsaung Remote Client ▼
အဲ့ Tool ကို သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ အင်တာနက် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ပြီးရင် connect နှိပ် လိုက်ပါ ပြီးရင် ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့် လိုက်ပါ ကြိုးထိုး လိုက်ပါ ဖုန်းရဲ့ မော်ဒန် အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ Rescan နှိပ်ပါ ပြီးရင် Baseband repair Tool ထဲ ၀င်ပါ repair method3မျိုး ရှိပါတယ် အဲ့ဒီ သုံးမျိုးနဲ့ ပြင်ကြည့်ပါ တော်ရုံဆို ပြင်လို့ ရပါတယ် အောက်မှာ EFS Backup လို့ ရတယ် Restore လဲ လုပ်လို့ ရပါတယ် ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ပဲ ကလိကြည့်ပေါ့။
Posts by ဟယ်လို သားကြီး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 06, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Error Repair, Phone Application, Tools
V Root နဲ့ ပေါက်ပြီး root access မရ ဖြစ်နေသူ များနဲ့ ( MTK Droid Tool မှာ adb not install error) Fix Tool
Phone Service သမားတွေ ကြုံဖူး ကြမှာပါ ကျွန်တော်လဲ ခဏ၂ ကြုံဖူး ပါတယ် V root နဲ့ ဖေါက်
ထားတဲ့ တစ်ချို့ အလုံးတွေမှာ apk တွေ အတွက် root access မရဘူးလို့ ပြနေ တတ်ပါတယ်။
MTK Droid Tool မှာလည်း adb not install error မျိုး ပြတတ်ပါတယ် ဒီ Error တွေကို Fix လုပ်
ပေးမဲ့ Bat Tool လေးကို Ko PHYO NYI NYI မှ ရေးသားပေး လိုက်ပါတယ်
(v root (Kinguser) ကနေ Chainfire ရဲ့ Superuser ပြောင်းပေးလိုက်ရင် ၁၀၀% အဲ့ဒီ error တွေ
သိပ်လန်းတယ် စမ်းကြည့်ပါ မကောင်းရင် ကျနော့်ကို ပြောပါ။ ကောင်းရင် မိတ်ဆွေတွေကို ပေး
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ dev-host.com ▼
From : PHYO NYI NYI
မူရင်းဆိုဒ် : https://www.facebook.com/kyawkyarnyu
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, January 28, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Error Repair, Phone Application, Root
Windows Repair 2.10.4 Final + Portable
Windows Repair 2.10.4 Final + Portable | 16.89 MB
ကဏ္ဍ Error Repair, Portable, Window
Windows Repair 2.10.3 Final + Portable
Windows Repair 2.10.3 Final + Portable | 16.11 MB
ReSharper9Update 1 Full
ReSharper ဆိုတာ Microsoft Visual Studio အသုံးပြုတဲ့ Developer အတွက် extension တစ်ခုဖြစ်ပါ
တယ်.. compiler errors, runtime errors, redundancies, code smells တွေနဲ့ အခြားအမှားများစွာကို
ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း ၉ ရဲ့ Update 1 ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်
ReSharper isapopular developer productivity extension for Microsoft Visual Studio. ReSharper will finds compiler errors, runtime errors, redundancies, code smells, and possible improvements right as you type, suggesting intelligent corrections for them. ReSharper makes Microsoft Visual Studioamuch better IDE. .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, refactorings, etc.
What's new in ReSharper9Update 1?:
Fix in Scope improvements
Type Dependencies Diagram
Home Page : https://www.jetbrains.com/resharper/
Download : ReSharper9Update 1 Setup : 130.02 Mb
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ jetbrains.com ▼
Download : ReSharper9Update 1 Keygen : 236 Kb
ကဏ္ဍ Error Repair, PC-Software
Windows Update, Windows Firewall နှင့် registry errors and file permissions စသည့် Windows problems
ဖြစ်လာပါက မိမိဝင်းဒိုးကို ပြန်ပြီး Repair လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ full ( Portable ) ဆော့စ်ဝဲလေးပါ ။
-နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေ အများကြီးပါ။ ဘာတွေ ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင် တယ် ဆိုတာ အောက်
မှာ ဆက်ဖတ်လိုက်ပါ။ ၀င်းဒိုးအားလုံး (32 & 64 Bit) အကုန်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Malware and installed programs can modify your default settings.
From: ဝင်းကမ္ဘာကျော် by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, September 03, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Error Repair, Window
Hard Disk အမျိုးမျိုးက Drive Errors တွေကို ပြင်ချင် ပါသလား
Disk အမျိုးမျိုး drive errors တွေကို ပြင်ချင် ပါသလား။ ပြင်နိုင်မည့် Software တစ်ခု အကြောင်း ပြောပါရစေ။
Softwareလေး ကတော့ TestDisk လို့ ခေါ်တဲ့ open source utility software ဖြစ်ပြီး Hard Disk အမျိုးမျိုးက
drive errors များကို ပြင်ပေးနိုင် ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် Partitions ပျောက်တာကိုလည်း ပြန်လည် ဖော်ထုတ်
ပေးပြီး boot လုပ်လို့ မရတာကိုလည်း ပြင်ပေး ပါသေးတယ်။
ဖိုင်ဆိုက်အရွယ်အစားကတော့ 3.3 MB ဖြစ်ပြီး TestDisk & PhotoRec 6.12 ကို အောက်မှာ ပေးထားတဲ့
လင့်ကနေ အခမဲ့ download ယူသုံးစွဲနိုင် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, June 27, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Driver-Software, Error Repair
We foundabug in this crack and fixed it in the V2.Now this activator works flawlessly :) Windows xp users : use the manual method
Done :) Enjoy lifetime DLL-files Fixer full version
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, May 09, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Error Repair
1. Blue Screen ကို အရင်ဆုံး အောက်ကလင့်မှာ Download ယူလိုက်ပါ။
2.ပြီးရင် Blue Screen Icon ပေါ်မှာ Right click ထောက်ပြီး Install ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော် အထက်
မှာ ပြထားတဲ့ ပုံပါ အတိုင်း ဖြစ်သွား ပါမည်။ စိတ်မပှုပါနဲ့ ခဏ စောင့်ပါ။ Windows Logo တက်လိုက် အ
ပေါ်က Error ပုံစံတက်လိုက် ဖြစ်နေပါမည်။ Keyboard က Key တစ်ခုခု နိုပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ် သွား
3. ပြီးရင် Blue Screen Icon ပေါ်မှာ Right click ထောက်ပြီး Configure ကို click နှိပ်လိုက်ပါ။
4. ပြီးရင် Fake disk activity ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ပြီးသွား ပါပြီ။ ကျွန်တော့် သူငယ်
ချင်းလို အထက်ပါ Error မျိုး ကြုံ ခဲ့ရင် အလွယ် ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ဝေငှပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, May 06, 2014 No comments:
DLL Suite 2013.0.0.2113 Multilangual Full + Keygen ( for PC )
မိမိ PC စက်မှာ dll file မရှိလို့ Error ဖြစ်တတ်တဲ့ PC သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေများကို DLL Suite
လေးက ကူညီ ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ
ဒီကောင်လေးက PC ထဲမှာ မရှိတဲ့ dll file error တွေကို ပြန်ပြီးဖြေရှင်းပေးမဲ့ ကောင်လေး
DLL Suite 2013.0.0.2113 Multilangual Full + Keygen is an advanced DLL files fixer that allows its users to fix .dll missing errors, repair .sys blue screen of death, remove .exe virus, and help download missing DLL files for free for Windows 7, Windows 8, Windows Vista and Windows XP PCs, both 32-bit and 64-bit operating systems.
dll file is missing, .dll file was not found, cannot find .dll file, can’t load .dll file.
Windows and programs take much more time to start.
Poor system performance and high CPU/Memory usage.
PC no sound, keyboard locked and Windows device mal-function.
Regular program freezing and system crashes.
Blue screen of death (BSOD) and more.
Dashboard: Fix and download all DLL files automatically.
Download DLL – Free: Scan and display your missing DLL files with free download
DLLPEDIA: Help search your needed DLL files and privide free download access.
Language: Dansk (Danish), Deutsch (German), Ελληνικa (Greek), English, Español
(Spanish), Français (French), Italiano (Italian), 日本語 (Japanese), Nederlands (Dutch),
Norsk (Norwegian), Polski (Polish), Português (Portuguese), Pусский (Russian), Suomi
(Finnish), Svenska (Swedish), Türkçe (Turkish), Thai and 中文繁體 (Traditional Chinese).
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 04, 20142comments:
Tenorshare Windows Boot Genius 2.0.0.1 Build 1887 + Pre Registered (215Mb)
Windows Boot Genius ဆိုတဲ့ ဆော့စ်ဝဲလေးကတော့ လက်ရှိဈေးက $79 ရှိပါတယ်။
အခုကျွန်တော်က Registered လုပ်ပြီးသားလေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ၀င်ဒိုး မတက်နိုင်တော့ရင် ၊
blue screen ပြသနာတွေ ၊ crashing ဖြစ်နေတာ တွေ ၊ တစ်ခါ တစ်ခါကြရင် NTLDR
Missing ဆိုပြီး Press + Ctrl+Alt+Del ကိုပဲ ဇွတ်နှိပ်ခိုင်းတာတွေ "NTLDR is Miss
ing", "BOOTMGR is Missing" စတဲ့ errors ကြုံဖူးကြမှာပါ။
ဒီလိုပြသနာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Drive Disk
ကို ရှာမတွေ့တော့တဲ့ ပြသနာတွပဲ။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ဘာလုပ်မလဲ ? ၀င်းဒိုးအသစ်တင်
ရင်လည်း လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မပြီးစီးတာတွေ ပျက်စီးကုန်မယ်။ Windows
system, recover data, repartition and clone hard disk ပြန်လည် ရယူနိုင်ဖို့
အတွက်ဒီကောင်လေးကို ထည့်သွင်းလိုက်တာနဲ့ အားလုံးပြန်လည် ရယူနိုင်ပါတယ်။
၀င်းဒိုးကိုလည်း နဂိုအတိုင်း Restart လုပ်ပြီးပြန်တက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆော့စ်ဝဲလေးကို အခွေဖြင့်ဘန်း ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတို့ အမြဲသိမ်းထားသင့်တယ်
၀င်းဒိုး (32-bit & 64-bit) အားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, January 31, 2014 No comments:
မျှဝေသူ Unknown မှာ Tuesday, January 15, 2013 No comments:
ကွန်ပျူတာကိုမြန်ဆန်သွက်လက်စေဖို့ Error Repair.Professional.v3.8
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, July 20, 2012 No comments: